UMaimane uthi inhlangano yokhetho yehlulekile ukuhlinzeka ukhetho oluphephile - Bayede News
Nakulokhu iNkandla iyinjolozela yomlando
Uphenyo lweKhomishini eholwa nguMehluleli uMoseneke luzwile ukuthi ukuhlehliswa kokhetho loHulumeni Bezindawo lwangoMfumfu zingama-27 kuzoba nomthelela omkhulu ekusebenzeni komasipala.
Amaqembu ezepolitiki agxeke iKhomishini Yezokhetho eyisola ngokwehluleka ukuveza izinyathelo azithathile ukuqinisekisa ukhetho loHulumeni Bezindawo olukhululekile, olunobulungiswa noluphephile. Uphenyo oluholwa nguMehluleli uDikgang Moseneke osethathe umhlalaphansi lubheka ukuthi ngabe ukhetho loHulumeni Bezindawo olukhululekile nolungenzeleli lungabanjwa yini ngaphansi kwesimo sokhuvethe esigubuzele izwe.
Umholi we-One SA Movement, uMmusi Maimane (osesithombeni), uthi kungenzeka kubanjwe ukhetho ngaphansi kwezimo eziphephile zabavoti. Uthi ubhubhane luzoba nathi iminyaka eminingana futhi ukuhlehlisa ukhetho ngeke kwenze mehluko.
UMaimane uthi ngezinga eliphansi lapho kugaywa khona imijovo yokugoma eNingizimu Afrika akunakwenziwe ukugonywa kweningi esikhathini esizayo esibhekwe ngabomvu, esibhekwe njengesandulela sokubamba ukhetho oluphephile. UMaimane uthi ukuhlehlisa ukhetho kuzoba nomthelela ekusebenzeni komasipala kubandakanya nezinqubo zesabelomali kanye nokwamukelwa kweZinhlelo Zentuthuko Ehlanganisiwe.
“Ngaleso sikhathi uzobe ucela izakhamizi ukuthi zixhase amavoti abo ezingaphansi kwamaqembu ezepolitiki angenalo igunya. Futhi lokho kungabeka engcupheni izimo zenhlalo nezomnotho izakhamizi ezizithola zikuzo. Futhi ngingancenga uma kubhekwa ukuthi ukubanjwa kokhetho kwe-IEC ngomhla zingama-27 kuMfumfu kungumcimbi ongabhebhethekisa ukhuvethe , okungaba yisimo esikhona eminye imicimbi ebhebhethekisa ukhuvethe exhaswe ngamaqembu ezepolitiki emigwaqweni lapho ezwa khona ukuthi igunya kufanele ifunwe ngandlela thile futhi uma ingeke ivezwe kubhalothi. Kungabekwa nakwezinye izindawo, ”kusho uMaimane.
I-ActionSA ithi i-IEC yehlulekile ukudalula izinyathelo ezithathile ukuqinisekisa ukhetho loHulumeni Bezindawo olukhululekile, olunobulungiswa, futhi oluphephile.
Anathi Mtaka Jul 2, 2021